MAE: matotra ny fiaraha-miasa amin’i Sina | NewsMada
MAE: matotra ny fiaraha-miasa amin’i Sina
Anisan’ireo firenena afrikanina valo, nihaona tamin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny sinoa, i Wang Yi, ny minisitra malagasy (MAE), Andriantsitohaina Naina. Votoatin’ny fotoana tany Sina ny fivoriamben’ny mpandrindra hanatanteraka ny vokatry ny fihaonana an-tampony tany Beijing, nandritra ny « Fihaonambe mikasika ny fiaraha-miasa Sina sy i Afrika » (FCSA), atao ny 24 sy 25 jona izao.
Nambaran’ny minisitra Andriantsitohaina Naina, nandritra ny fihaonany tamin’ny minisitra sinoa, fa misy ny fanantenana hampiroboroboana hampifandrindrana ny Finiavana fifamatorana sy lalana (Initiative la ceinture et la route) sy ny vokatry ny fihaonamben’i Beijing (Focac), andaniny, amin’ny paikady hampandrosoana an’i Madagasikara, ankilany. Nanamarina ny minisitra sinoa, nilazany fa vonona hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra samihafa i Sina.
Notoloran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Andriantsitohaina Naina, mariboninahitra koa ny dokotera sinoa, miisa 30, ny 23 jona teo, ho fankasitrahana ny asa fitsaboana nataon’izy ireo taty Madagasikara. Nomarihiny fa anisan’ny zava-dehibe amin’ny fiaraha-miasa amin’i Sina ny fananganana fotodrafitrasa, ny fitaovana sy kojakojam-pitsaboana, ny fitetezam-paritra amin’ny fitsaboana. « Endriky ny fahatokisan’ny Malagasy ny fiaraha-miasa amin’i Sina izao hetsika izao », hoy ihany ny minisitra.